Kooxaha Manchester United,Sunderland iyo Preston North End oo u Soo Baxay Wareega Shanaad ee Koobka FA Cup-ka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxaha Manchester United,Sunderland iyo Preston North End oo u Soo Baxay Wareega Shanaad ee Koobka FA Cup-ka “SAWIRRO”
Kooxda Manchester United ayaa u soo baxday wareega shanaad ee koobka FA Cup-ka,ka dib markii ay garoonkeeda Old Trafford 3-0 uga badisay kooxda Cambridge United oo ka ciyaarta heerka afaraad ee dalka ingiriiska.
Labadan kooxood ayaa todobaadkii hore barbardhac 0-0 ah ku soo kala baxay garoonka Abbey Stadium.
Kooxda Manchester United ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 25-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Juan Mata.
Ciyaaryahan Marcos Rojo ayaa daqiiqadii 32-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester United,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan James Wilson ayaa daqiiqadii 74-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Manchester United.
Kooxda Manchester United ayaa wareega shanaad ee koobka FA Cup-ka la ciyaari doonto kooxda Preston North End oo ka ciyaarta heerka sedaxaad ee dalka ingiriiska.
Kooxda Fulham oo ka ciyaarta heerka labaad ee dalka ingiriiska ayaa waxaa garoonkeeda Caraven Cottage 1-3 uga badiyay kooxda Sunderland.
Kooxda Fulham ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 28-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Hugo Rodallega,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Sunderland ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta dhalisay sedaxda gool,waxana goolka koowaad ee bareejada ka dhaliyay kooxdiisa ciyaaryahan Marcus Bettinelli,halka goolka labada gool ee kale ay u kala dhaliyeen kooxda Sunderland ciyaaryahanada kala ah Ricardo Alvarez iyo Jordi Gomez.
Kooxda Sunderland oo ka ciyaarta horyaalka Premier League-ga ayaa wareega shanaad ee koobka FA Cup-ka la ciyaari doono kooxda Bradford City oo koobkan ka reebtay kooxda Chelsea.
Kooxda Sheffield United oo ka ciyaarta heerka sedaxaad ee dalka ingiriiska ayaa waxaa garoonkeeda Bramall Lane 1-3 uga badiyay kooxda Preston North End oo ka ciyaarta heerka sedaxaad ee dalka ingiriiska.
Kooxda Sheffield United ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 37-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Jamie Murphy,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Preston North End oo ka ciyaarta heerka sedaxaad ee dalka ingiriiska ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta dhalisay afar gool,waxaana labo kamid ah u dhaliyay ciyaaryahan Paul Gallagher,halka goolka sedaxaad uu u dhaliyay ciyaaryahan Paul Huntington.
Kooxaha Bayern Munich iyo Wolfsburg oo Badin Waayay iyo Borussia Moenchengladbach oo Badisay “SAWIRRO”
Kooxda Roma oo Ka Hartay Koobka Coppa Italia